2 Samoela 6.1-11
Ny amin’ny fiaran’ny fanekena , ilay vata kely 115 sm ny lavany ary 70 sm ny sakany sy haavony . Tao no noraketana ny didy folo.
1-Manambara ny fanatrehan’ Andriamanitra izy .
Tany Baala-Joda na Kiriata-Jearima, faritanin’ny Benjamina (Jos 18.28) no nipetraka izy io rehefa naverin’ny Filistina (1 Sam 7.1). Andriamanitra eo ka miara-monina ,azo antsoina no raketin’ny fiaran’ny fanekena. Raharaha iombonana ny famindrana azy ,noho izany satria laharam-pahamehana eo amin’ny fampiorenam-piainana ny fampitoerana azy eo amin’ny tontolo iainana.
2-Manambara ny fahamasinan’Andriamanitra izy .
Ny Levita no mahazo mikasika sy mikarakara ny fonenan’ny Tompo na ny alitara sy ny momba azy . Tsy manan-jo amin’izany i Oza Benjamita na dia nampandeha ny sarety sy efa nihazona izany tao an-tranony efa ho roapolo taona aza (1Sam 7.2) . Izay no antony namelezan’ny Tompo azy ho faty.
3-Mitondra fitahiana ho an’izay ietrahany izy .
Navily ho any amin’i Obeda ilay Levita (1 Tant 15.16-17.24) ny vata misy ny fanekena . Tonga fitahiana ho azy ny telo volana nitoeran’ny fiara tao amony. Fa tsy misy olona mampiantrano marina an’i Jesoa ka tsy hahazo fitahiana (Lio 19.10).